I-OnePlus 7 vs OnePlus 7 Pro: ukuthelekisa okunzulu | I-Androidsis
Ngokwenyani ukusukela ukuba inkampani ye-OnePlus yaziwa kwintengiso kunye ne-OnePlus One, isiphelo soqoqosho esinezibonelelo ezilungileyo zomzuzuInkampani yaseAsia ibisungula iimodeli ezintsha kwintengiso, phantse zonke iinyanga ezi-6. Ngohlobo ngalunye olutsha alonyusi ixabiso kancinci kuphela, kodwa kunye nezibonelelo (nangona kungenjalo).
Nangona kunjalo, kubonakala ngathi kulo nyaka wayefuna ukungena kwicandelo eliphezulu, labantu abachitha imali eninzi kwi-smartphone. Kulo nyaka, ukubheja kwe-OnePlus ziziphelo ezibini: i-OnePlus 7 kunye ne-OnePlus 7. Pro njengoko unokulindela, inguqulelo yePro, ukongeza ekubeni ibiza kakhulu, isinika uthotho lweempawu ezixhasa ixabiso lazo. Apha sikubonisa ifayile ye- Thelekisa phakathi kwe-OnePlus 7 kunye ne-OnePlus 7 Pro.
1 Thelekisa itafile OnePlus 7 vs OnePlus 7 Pro
2 Isikrini se-AMOLED kuwo wonke umntu
3 Akukho notshi yalo naluphi na uhlobo
5 Amandla kunye nokusebenza kwe-OnePlus 7
6 Amaxabiso e-OnePlus 7 kunye ne-OnePlus 7 Pro
7 I-BUTS ezimbini ezinkulu ngokuxhomekeke kwindlela ojonga ngayo
8 Ndithengela yiphi i-OnePlus?
Thelekisa itafile OnePlus 7 vs OnePlus 7 Pro
Akukho ndlela ikhawulezayo kwaye ibonakalayo yokujonga ukuba yeyiphi umahluko ophambili kuzo zombini iitheminali ngaphandle kwetafile. Kule tafile ungabona ngokukhawuleza ukuba zeziphi eziphambili Umahluko phakathi kwe-OnePlus 7 kunye ne-OnePlus 7 ProUmahluko esiwunika iinkcukacha apha ngezantsi.
Isikrini I-AMOLED 6.41 intshi - isisombululo 2.340 × 1.080 - 402 dpi-Hlaziya ireyithi 90 Hz I-AMOLED 6.67 intshi-isisombululo 3.120 x 1.440 - 516 dpi
Inkqubo Qualcomm Snapdragon 855 Qualcomm Snapdragon 855
Igrafu Adreno 640 Adreno 640
Imemori ye-RAM Uhlobo lwe-6/8 GB ye-LPDDR4X Uhlobo lwe-6/8/12 GB ye-LPDDR4X
Ukugcina ngaphakathi I-128/256 GG 128 / 256 GB
Ukuvula iinketho Iscreen sensor yeminwe-ukuqondwa kobuso Iscreen sensor yeminwe-ukuqondwa kobuso
Cámara trasera Someleza Optical - Nqununu 48 mpx f / 1.7 - Isikolo esiphakamileyo 5 mpx f / 2.4 Someleza Optical - Nqununu 48 mpx f / 1.6 - Ifowuni 3x 8 mpx f2.4 - Indawo ebanzi 16 mpx f / 2.2 117th angle angle
Ikhamera yangaphambili 16 mpx f / 2.0 ngozinzo lwe-elektroniki 16 mpx f / 2.0 ngozinzo lwe-elektroniki
Inkqubo yokusebenza I-OxygenOS esekwe kwi-Android 9 I-OxygenOS esekwe kwi-Android 9
Ibhetri I-3.700 mAh ngenkxaso ekhawulezileyo yokuhlawula I-4.000 mAh ngenkxaso ekhawulezileyo yokuhlawula
U bunzima I-182 gram I-206 gram
Ubukhulu 157.7 × 74.8 × 8.2 mm 162.6 × 75.9 × 8.8 mm
Imibala Izibuko ezingwevu I-Almond / Mirror Ngwevu / Nebula Luhlaza
evakalayo Izithethi zeStereo- iDolby Atmos Izithethi zeStereo- iDolby Atmos
Izibuko Uhlobo lwe-USB 3.1 C. Uhlobo lwe-USB 3.1 C.
Ixabiso ukusuka kwi-559 euros 709 euro
Isikrini se-AMOLED kuwo wonke umntu
Izikrini ezinetekhnoloji ye-AMOLED zisinika uthotho lwezibonelelo esele sichazile izihlandlo ezininzi, eyona nto inomtsalane yile ivumela ukuba sigcine ibhetri xa sisebenzisa imibala emnyama ngokupheleleyo. Ngokumiliselwa kwe-Android Q, uGoogle sele eqinisekisile ukuba uhlobo olulandelayo lwe-Android luya kuphumeza imo emnyama, imowudi eya kuthi ifumaneke kuzo zonke usetyenziso lwesigebenga.
I-OnePlus 7 Pro ayisixhasi nje kuphela isikrini esimangalisayo ngaphandle kwalo naluphi na uhlobo lwenotshi, kodwa nayo isinika inqanaba lokuhlaziya nge-90 Hz, inqanaba lokuhlaziya elisinika ubumdaka kunye nokucaca okukhulu xa sikrola ngokukhawuleza kodwa iya kusivumela ukuba sonwabele eyona midlalo inzima ngendlela engamanzi nangokubonakalayo.
I-OnePlus iyaqhayisa ngokuba imodeli ye-7 Pro ngowokuqala ukuphumeza umboniso ngenqanaba lokuhlaziya le-90HZ, nangona ayisiyiyo eyona nto sinokuyifumana kwimarike, kuba ngaphandle kokuqhubeka, iRazer Ifowuni isinika inqanaba lokuhlaziya elingaphezulu, i-120 Hz kwaye iphantse ibe yiminyaka emibini, xa isizukulwana sokuqala sale smartphone.
Akukho notshi yalo naluphi na uhlobo
Umtsalane ophambili obonelelwa yi-OnePlus 7 Pro ufumaneka kwiscreen, isikrini igubungela phantse lonke icala lesixhobo, kubandakanya amacala, ngaphandle kwendawo encinci emazantsi. Olu luyilo aluthethi ukuba alunakhamera yangaphambili, kuba ibekwe kwindawo ephezulu yesiphelo kwaye iyarhoxa, oko kukuthi, ibonakala kwaye inyamalale ngokweemfuno zethu.
Ingxaki enokuthi ivelise ukuba ngaba i-terminal iyawa, kodwa kuyo yonke ingxaki kukho isisombululo. Ngokomvelisi, ukusebenza kwekhamera erhoxiswayo kunxulunyaniswe nesantya, Accelerometer ukuba ifumanisa ukuba i-terminal iyawa, iya kuthi ngokukhawuleza ifihle imodyuli yekhamera ukuze ingaqhekeki.
Konke kuhle ekuqaleni. Kodwa sisixhobo, isixhobo esihamba ngemoto ekuhambeni kwexesha inokuyeka ukusebenza ngenxa yokungena kothuli okanye naluphi na olunye uhlobo lobumdaka. Okanye inokuqhekeka nje ekusebenziseni.
I-OnePlus 7 yenxalenye yayo, iyasinika uyilo olufana kakhulu nesizukulwana esidlulileyo, kunye notshi emile okweenyembezi ngaphambili kwesixhobo. Ukuba usebenzisa ukubonwa kobuso ukuvula i-terminal, le modeli iya kukuvumela ukuba ufikelele kwisiphelo sendlela ngokukhawuleza ngaphandle kokulinda ukuba imodyuli engaphambili yemodeli yePro ivele.
Ngaphandle kwento yokuba abavelisi abaninzi bayanyanzelisa ukuba i-smartphone iya kuthi ngexa elithile ithathe indawo yeekhamera ze-SLR (ububhanxa obuzimeleyo), ngethamsanqa kumsebenzisi bayaqhubeka nokuphucula eli candelo minyaka le kwiitheminali zabo, kuba i-smartphone iye yaba sisixhobo esisetyenziswa kakhulu ukuthatha naluphi na uhlobo lokufota okanye ividiyo, kubandakanya iminyhadala ekhethekileyo, ngakumbi intuthuzelo esisinika yona.
I-OnePlus 7 Pro khetha ukulandela imeko yentengiso kunye nokudibanisa iikhamera ezi-3 ngasemva. Esona siphambili sisinika isisombululo se-48 mpx, silandelwe yi-8 mpx lens telephoto nge-3x magnification kwaye eyokugqibela yi-16 mpx angle engile ene-angle yokujonga ye-117 degrees.
Ngenxalenye yalo, i I-OnePlus 7 isinika, njengandulelayo, iikhamera ezi-2 ngasemva, eyona iphambili iyafana ukuba sinokuyifumana kwimodeli yePro ngesisombululo se-48 mpx kunye nesesibini nge-5 mpx.
Amandla kunye nokusebenza kwe-OnePlus 7
Entsha i-OnePlus 7 kunye ne-7 Pro zilawulwa yi Iprosesa yamva nje yeQualcomm, iSnapdragon 855. Nangona kunjalo, ngaphakathi kwesiphelo kunye nokunceda ukulawula inkqubo yokusebenza, sifumana iinguqulelo ezahlukeneyo. Kwelinye icala, zombini i-OnePlus 7 kunye ne-OnePlus 7 Pro ziyafumaneka kwiinguqulelo ze I-6 GB ye-RAM kunye ne-128 GB yokugcina kunye I-8 GB ye-RAM kunye ne-128 GB ukugcinwa.
Imodeli yePro ikwafumaneka kwi Inguqulelo ye-12 GB yememori ye-RAM kunye ne-256 GB yokugcina. Ukongeza, ifumaneka kuphela komnye wemibala emithathu apho imodeli yePro ifumaneka khona, kuba i-OnePlus 7 ifumaneka kuphela kumbala weMirror Grey, nangona inguqu ekhethekileyo ebomvu izakufika eIndiya nase China.
Zombini iitermina zisungula inkqubo ye 10 umaleko lungapholi ulwelo ogcina ubushushu befowuni busemgceni, nokuba sisebenzisa onke amandla asinika wona.
Amaxabiso e-OnePlus 7 kunye ne-OnePlus 7 Pro
Njengoko sibona kwitafile engentla, ixabiso lokuqala le-OnePlus 7 yenguqulo esisiseko ye-OnePlus 7 iqala nge-euro ezingama-559, ngelixa inguqulelo esisiseko ye-OnePlus 7 ingama-euro angama-709.
I-OnePlus 7 6 GB ye-RAM + ne-128 GB yokugcina 559 euro Izibuko ezingwevu
I-OnePlus 7 8 GB ye-RAM + ne-256 GB yokugcina 609 euro Izibuko ezingwevu
I-OnePlus 7 Pro 6 GB ye-RAM + i-128 GB yokugcina 709 euro Izibuko ezingwevu
I-OnePlus 7 Pro 8 GB ye-RAM + i-256 GB yokugcina 759 euro I-Mirror Grey-Nebula Luhlaza-iAlmond
I-OnePlus 7 Pro 12 GB ye-RAM + i-256 GB yokugcina 829 euro Nebula Luhlaza
I-BUTS ezimbini ezinkulu ngokuxhomekeke kwindlela ojonga ngayo
Uluhlu lonke lwe-OnePlus, ukusukela ukuba inkampani yaqala imodeli yokuqala, ayikaze inike ukunganyangeki okuqinisekisiweyo kwamanzi kwiziphelo zayo, isiqinisekiso se-IP sesona siphelo siphezulu sinokufumana kwimarike. Isatifikethi se-IPxx sisiqinisekisa ukuba i-terminal yethu iyamelana nenani lesiqinisekiso esisifumeneyo. Eyona nto ixhaphakileyo yi-IP68, isatifikethi esiqinisekisa ukuba isiphelo sendlela siwela emanzini Ayizukuonakaliswa kukungena kolwelo.
Enye yezona zibalaseleyo kodwa kukuba ayiboneleli ngenkqubo yokutshaja ngaphandle kwamacingo. Intloko yenkampani iqinisekisa ukuba olu hlobo lomthwalo lucotha kakhulu. Ukuhlawulela oku kucotha, umenzi usinika inkqubo yokutshaja ngokukhawuleza leyo isivumela ukuba silayishe i-terminal ngaphezulu nje kweyure. Ukuthi ga, kuhle.
Ukutshaja ngaphandle kwamacingo kusivumela ukuba sibeke i-terminal ngaphezulu kwitshaja ukuze ihlawuliswe ngaphandle kokusebenzisa intambo. Nangona icotha kunenkqubo yokutshaja eneentambo (ngentambo) ebusuku sinexesha elaneleyo lokuyibiza ngesantya osifunayo, kuba asizicwangcisi ukuphuma iiyure ezimbalwa. Uncedo lokungafuneki kwintambo ukulayisha i-terminal yinto ethi xa uyiqhelile ungafuni ukubuyela kwindlela yesiNtu.
Ndithengela yiphi i-OnePlus?
Ekuqaleni, kwaye njengesiqhelo, konke kuxhomekeke kuhlahlo-lwabiwo mali. Inguqulelo yePro ye-OnePlus kunye zinomahluko xa kuthelekiswa neqhelekileyo kwi-euro ezingama-150, njengoko sinokubona kwicandelo elidlulileyo. Ukuba unayo i-euro ezingama-150 ngaphezulu kwaye ungazi ukuba wenzeni ngazo, imodeli yePro lukhetho oluhle kakhulu ekufuneka uluthathile, ukuba ucacile ukuba uya kwi-OnePlus entsha.
Nangona kunjalo, ukuba awukabinayo into emele i-OnePlus, ngoku Lithuba elihle lokufumana imodeli yangaphambili, i-OnePlus 6T, imodeli ekwabelana ngeempawu ezininzi kunye ne-OnePlus 7 entsha ngaphandle kweprosesa, owona mahluko uphambili. Le modeli inokufumaneka kwiAmazon nakwiEbay ngaphezulu nje kwe-500 euro.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » I-OnePlus 7 vs OnePlus 7 Pro: ukuthelekisa okunzulu